आज शनिबार भक्तपुरलाइ केन्द्र बनाएर भुकम्पको धक्का
शनिबार दिउँसो काठमाडौंमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ । आज शनिबार अपराह्न ४ :१६ बजे भक्तपुरलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भुकम्पको धक्का आएको हो। आजको भूकम्पमा करिब ४.६ रेक्टर स्केलको धक्का महसुस …
भ्रस्टाचार बिरुद्धको अभियान अन्तर्गत संचालनमा आएको ‘ नेपालका लागि नेपाली ‘ को कार्यक्रम पोखरा मा भएको छ। देशभर बिभिन्न शहरमा आफ्नो कार्यक्रम गर्दै अघि बढिरहेको नेपालका लागि नेपाली अभियानले नेपालमा …
ताजा खबर / भिडियो
कामलाइ सम्मान गर्ने नायक सरोज खनालले यसरि अण्डा बेच्दै ! उनि यसो भन्छन ( हेर्नुस भिडियोमा )
काम लाइ सम्मान गर्ने नायक सरोज खनाल अण्डा बेच्न थालेका छन्। कामलाई सानो ठुलो भन्न नहुने धारण राक्ने सरोज खनाल आफु जुन सुकै काम पनि गर्न तयार रहने बताउछन। फिल्म …
एसईई नतिजाको कारण सदीक्षाको गयो ज्यान, गरिन् आत्महत्या
एसईई परिक्षामा आफुले सोचे अनुसार नतिजा नआउदा एक किशोरीले आत्महत्या गरेकी छिन। काठमाडौं चन्द्रागिरी १२ बलम्वु दुरसञ्चार श्री बलम्बु माविबाट यस वर्ष एसईई परिक्षा दिएकि किशोरी सदीक्षा पौडेलले शनिबार दिउँसो …
एसईईमा ४ मा ४ जिपीए ल्याउदै बने सबैभन्दा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थी , पाए बधाई
‘गलबन्दी’ गीतको विवाद टुंगियो ! शम्भु राई र प्रकाश सपुतबीच भयो यस्तो सहमति
प्रकाश सपुत र शम्भु राइ बीच गलबन्दी गीत मिलेको बिबादको सम्बन्धमा रहेको सहमति भएको छ। केहि समय देखि प्रकाश सपुतको गलबन्दी च्यातियो र शम्भु राइको तिहारको गीत आउ नाच्छौ साथीहो …
एसइई परिक्षाको नतिजा आज सार्वजनिक हुँदै ! यसरि हेर्नुस परीक्षाको नतिजा – तरिका सहित
आज बुधबार एसइई परीक्षाको नतिजा सार्बजनिक गर्ने तयारि भएको छ। यस बर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसइई परीक्षाको नतिजा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले तयारी गरेको हो। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका उपनियन्त्रक …
नेपाल बन्द गर्नेहरुलाई रविले दिए यस्तो नयाँ आइडिया
आज नेपाल बन्द गरियो, कति सफल कति असफल भयो त्यस बारे चर्चा नगरौ । अझै पनि बिरोध गर्ने शैली किन त्यति पूरानो, किन ? माग जायज–नाजायज त्यो तपाईहरु आँफै मूल्याङकन …
तुईन तान्ने बाजेलाई भद्रगोलका जिग्री-पांडेले हस्तान्तरण गरे नया घर ( हेर्नुस भिडियोमा )
चर्चित हास्यकलाकार कुमार कट्टेल ‘जिग्री’ र अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे’ ले ८० वर्षीय तुईन चालक शुक्रबहादुर चेपाङको नयाँ घर हस्तान्तरण गरेका छन् । धादिङ चरौदी स्थित त्रिशुली नदी किनारमा विगत २० …
‘तिम्रो मायाले बाधेर राख ’ चर्चित कभर गायिका एलिना चौहानको नया गीत ‘सम्बन्ध’……… भिडियो
कभर गीत गाएर धेरैले आफ्नो करियर निर्माण गरेका छन्। यसरि नै कभर गीतबाट चर्चा आएका हरु मध्ये एलिना चौहान पनि एक हुन्। यस्तै कभर भिडियो बनाएर चर्चा मा आएकी एलिना …
बिषालु च्याउ खाएर बिरामि परेका मध्ये ३ जनाको ज्यान गएको छ। विषालु च्याउ खादा गत शुक्रबार देखि बिरामी परेका पाल्पाका ११ जना मध्ये ३ जनाको गएराति उपचारको क्रममा निधन भएको …
अहिले गीत संगीतमा दख्खल दिने र राम्रो गाउने प्रतिभाको राम्रो भबिस्य छ। देशका कुना कुनामा पुगेर प्रतिभा खोज्ने काम भैरहेको छ। विभिन्न युट्युब च्यानल हरुले आफ्नो दैनिक नै बनाएका छन् …
सारेगमप लिटिल च्याम्पमा सेकेन्ड रनरअप बनेर फर्किएका नेपालको शान ईटहरीका प्रीतम आचार्यलाई काकडभिट्टामा भब्य स्वागत गरिएको छ । यस्तै गरि चौथो बनेका आयुष यस अघि नै काठमान्डौ आइसकेका छन्। ईटहरीबाट …
सारेगमप लिटिल च्याम्पमा बाल गायक र नेपालका शान आयुष केसी चौथो भएका थिए । त्यसै गरि नेपालकै अर्का बाल गायक प्रितम आचार्य तेश्रो स्थान हासिल गरेका छन् । यता प्रीतमको …